Maxay tahay sababta uu Madaxweynaha Argentina ku diiday inuu la kulmo Lionel Messi iyo Saaxiibadiisa xulka, iyagoo weliba ku guuleystay Copa America? – Gool FM
(Buenos Aires) 14 Luulyo 2021. Warbixintan waxa aynu ku eegi doonnaa sababtii uu Madaxweynaha waddanka Argentina ee Alberto Fernandez ku diiday inuu ku qaabilo ama kula kulmo ciyaartoyda xulka qaranka Argentine weliba iyagoo ku guuleystay Koobka ugu qaalisan Koonfurta Ameerika ee Copa America kaas oo ay ku tartamaan xulalka qaranka dalalka 14 ka ah ee dhaca Koonfurta Mareykanka.
Wareysi gaar ah oo uu madaxweynaha dalka Argentine ee Alberto Frenandez siiyay Radio10 oo ka howl gala gudaha dalkaasi ayaa waxa uu ka hadlay sababtii uusan u qaabilin ama uga hor tagi waayay ciyaartoyda xulka Argentine oo Axaddii ku soo guuleystay Copa America, markii ay 1-0 kaga badiyeen xulka Brazil.
Madaxweyne Fernandez ayaa waxa uu yiri: “Waxaa la iga codsaday in aan xiddigaha xulka Argentine kaga hor tago garoonka Ezeiza ee magaallada Buenos Aires, laakiin waan diiday, waa inaan howsheenna qabsannaa, ma doonayo in aan kubadda cagta u isticmaalo arrimaha siyaasadda, sidoo kale ma doonayo in loo fasirto in aan rabo in aan guushii ay gaareen xulka siyaabo kale u isticmaalo”.
Madaxweynaha Argentine oo hadalka sii wata ayaa yiri: “Waan heysannaa waqti nagu filan oo aan ku qaabilno ciyaartoyda xulkeenna, shacabka reer Argentine oo dhan waxay siiyeen farxad weyn, aad baana ugu mahad celinayaa”.
Wuxuu sheegay Madaxweynuhu in uu aad uga walwalsanaa kulankii final-ka Copa America ee Brazil, hase yeeshee waxa uu ammaanay shaqadii wanaagsanayd ee uu qabtay Tababaraha xulka Argentine ee Lionel Scaloni.
Dhanka kale Madaxweynaha Waddanka Brazil ee Jair Bolsonaro ayaa Khamiistii sheegay in xulka dalkiisa ee Brazil ay 5-0 kaga badin doonaan xulka Argentina, laakiin taasi ma dhicin oo iyagaa 1-0 Koobka looga qaaday.
Waa markii ugu horreysay muddo 28 sanadood ah oo ay xiddigaha Argentina ku guuleystaan Koob weyn, halka sidoo kale uu Koobkan noqonayo koobkii ugu horreeyay ee weyn ee uu ciyaaryahan Lionel Messi la qaado xulka Argentina, waana koobka labaad ee ka maqnaa Qasanadda Koobabka Lionel Messi marka laga reebo Koobka Adduunka.
Garoonka Maracanã ee Magaalada Rio de Janeiro ee Brazil ayaa sidoo kale xusuus gaar ah u leh Messi, maadaama uu yahay isla garoonkii ay xulka Argentina uu kula ciyaartay dhiggooda Jarmalka kama dambeystii Koobkii Adduunka 2014-kii, Koobkaas oo ay ku guuleysteen Jarmalku markii ay 1-0 ku badiyeen, waxaana goolkaas madiga ah xulka Jarmalka u dhaliyey Mario Götze.
Shirkadda Puma oo soo bandhigtay maaliyadda Manchester City ee kulammada guriga xilli ciyaareedka & xusuusta ugu weyn Sergio Aguero oo funaanadda lagu xardhay... +(Sawirro)